Izindlu zaseDuarte - Indlu T1, enokubukwa kolwandle
Izindlu zaseDuarte - Indlu T1
Itholakala e-Pederneira Nazaré, iyindlu ye-T1, esitezi esiphansi, ehlanzeke ngokwedlulele, ifakwe zonke izinsiza ezidingekayo ukuze uchithe iholide elihle.
Inethala elibanzi kakhulu elinombono omangalisayo wolwandle nendawo yolwandle, lapho ekugcineni kosuku ungajabulela ukushona kwelanga okumangalisayo.
Emnyango wendawo yokuhlala kunendawo yokukhipha amagciwane enejeli yotshwala yesandla yesanitizer ukuze ukwazi ukubulala amagciwane ezandleni zakho njalo uma ungena endlini.
Indlu evuselelwe futhi ine-air conditioning (ukushisa/ukubanda), inekamelo lokulala elinemibhede yabantu ababili, i-TV kanye nokulala. Igumbi lokuhlala nekhishi ndawonye, nendawo yokudlela, ifakwe (isitofu nohhavini, ifriji, i-microwave, umshini wekhofi, i-toaster), usofa ne-TV. Indlu yokugezela inamathawula, izinto zokugeza kanye nesomisi sezinwele samahhala.
Ngaphandle, ungajabulela nevulandi lapho kukhona indawo yokosa inyama, kanye nethala elibanzi elinendawo yokudla, kunesikhala esinomshini wokuwasha esisetshenziswa okuvamile (kwabelwana kuphela nendlu ye-T2 nenye indlu ye-T1 engiqashisa kuyo. endaweni efanayo).
I-patio kanye nethala kubanzi futhi kuyanconywa ukuthi uqhelelane nomphakathi futhi indlu ngayinye inefenisha yayo yangaphandle.
4.80 ·243 okushiwo abanye
4.80 · 243 okushiwo abanye
Kungaba amamitha angama-720 (imizuzu eyi-15) ukusuka endaweni yolwandle.
Endaweni ezungezile kukhona ikhefi, imakethe encane yasendaweni, indawo yokubhaka, indawo yokubhaka, izindawo zokudlela, izikhumbuzo kanye nemibono.